शैतानको झोले कि शिवको भोले :: Setopati
समय: वर्तमान काल
स्थान: शून्य चौतारी
मैले विषय उठान गरेँ।
भनेँ, ‘पृथ्वीमा वातावरणीय र पर्यावरणीय प्रदूषणले भयावह रूप लिएको छ। मान्छेलाई सास फेर्न नै गाह्रो छ। श्वासप्रश्वासको रोग अत्याधिक मात्रामा बढेको छ। पृथ्वीको तापक्रम बढ्दो छ। वातावरणविद्‌का भनाइ सत्ताधारी अवमूल्यन् गर्छन्। यही गतिमा त संसार छिट्टै बस्नै नसकिने अवस्थामा पुग्छ कि, भन्ठानेर मैले सत्य युगको सुनौलो विहानी आइनपुग्दै यो शून्य चौतारीमा समाजका विज्ञहरू र अध्यात्मविदमाझ यो विषय उठान गरेको हुँ। यसमा तपाईँको भनाइ के छ? म यी विचारलाई जनमानससम्म पुर्‍याउने प्रयत्न गर्नेछु।’
UNEP का प्रतिनिधि थिए एक जना। उनले भने, ‘कार्बन फुटप्रिन्ट कम गर्ने धेरै उपाय हामीले सुझाएका छौं। ती मध्ये वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग प्राथमिक हो। सौर्य ऊर्जा, जल ऊर्जा र वायु ऊर्जाको प्रयोग गर्ने। रूख विरूवा रोप्ने। विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा जोड दिने। वातानुकूलितको धेरै प्रयोग नगर्ने। तर हाम्रा सत्ताधारीलाई समाधानका उपाय अपनाउने त के समस्याको बारेमा सुन्नेसम्म फुर्सद छैन।’
Elon Musk भन्ने एक भौतिकवादी विज्ञ थिए। उनले भने, ‘यो पर्यावरणको समस्या हल गर्ने कोशिस गर्न सकिन्छ। उहाँले भनेका जस्तै उपाय अवलम्बन गर्न हामी प्रयत्न पनि गरिरहेका छौं। तर मेरो विचारमा यसका बाबजुद पनि हामीले अर्को धरातलको खोजी गर्नैपर्छ किन कि, पृथ्वीको पर्यावरणीय समस्याले यो स्थानलाई बस्न अयोग्य बनाउने प्रशस्त सम्भावना छ। म त्यसको तयारीमा पनि जुटिसकेको छु। आवश्यक पर्‍यो भने म मानवतालाई मंगलग्रहमा नै स्थानान्तरण गर्ने प्रबन्ध पनि मिलाउन सक्छु।’
बाबाजीको बोल्ने पालो आयो। उनले भने, ‘यस्तो रहनसहन र जीवनशैलीले त यो समस्या आउनै थियो नि। यस्तो अतिभौतिक संसारमा यो सधै घटित हुने समस्या हो भनेर इतिहासको अध्ययनले नै भन्छ। यो अतिभौतिकवादले निम्त्याएको समस्याको भौतिक समाधान नै खोज्ने हो भने त मंगलमा अमंगल खोज्न गए भैगोनी हाम्रा MUSK जीको पछि लागेर। हामी त धेरै पहिले गाउँले जीवन नै ठीक भनेर यो अतिभौतिकताबाट संसारलाई डाँडाकाँडातिर गाउँमा सार्ने कोशिस गरि नै रहेका छौं।’
शैतानको झोलेको बोल्ने पालो आयो। भन्यो,‘यीशूको महानताले प्रदान गरेको यो अतिभौतिक संसारमा हामी जति द्रूत गतिमा विकास गरिरहेका छौं न्यून मात्रामा प्रदूषण नभएको होइन तर यदि समुद्र मन्थन गर्दा शिवजीले कालकूट विष सेवन गरेर देवताको रक्षा गर्नुभएको थियो भने एकचोटी झुक्याएरै भए पनि उहाँलाई धुवाँ ग्रहण गराउने हो कि? यीशू र उहाँको मिल्ती नभएकोले यो मित्रवत तवरमा सम्भव हुने त मैले देखेको छैन।’
पालो बोल्ने शिवको भोलेको आयो। उनले भने, ‘अतिभौतिक मार्गमा चेतनालाई डोहोर्‍याएर अव्यवस्थित औधोगिकरण गरेपछि यो समस्या त आउने नै भयो नि। शैतानको प्रभावमा कलीयुग विकृतिको उत्कर्षमा छ। रूख सबै ढाल्ने। कंक्रीटको जंगल खडा गर्ने। प्रकृतिको दोहन गरेर चेतना सुकाइदिने। पेट्रोल र डिजेल जस्ता प्रदुषणजन्य पदार्थबाट धुँवा उत्सर्जन गरेर वातावरण र पर्यावरणमा खलल पार्ने। मानवता शैतानकै बाटोमा हिँड्ने हो भने त हामी प्रलयकै तयारीमा जुट्छौं। होइन त्यस्तो दुर्घटना नहोस् भन्ने हो भने कंक्रीटको जङ्गल भत्काऔं र रूख रोपौं अनि वैकल्पिक ऊर्जामा जोड दिऔं।’
अन्त्यमा ब्रम्हलोकको उच्च ओहदामा बस्ने एक पदाधिकारीको पालो आयो। ब्रम्हलोकको पदाधिकारी भए पनि अलि अनौठो देखिने गरी सुट लाएर बसेका थिए। उनले भने, ‘अब जोगीले जस्तो जंगल खडा गर्ने पक्षमा त हामी छैनौं। कलीयुगै भए पनि संसार पहिले भन्दा धेरै सभ्य भएको छ भन्ने हाम्रो सर्वसम्मतिको निर्णय हो। त्यसैले पृथ्वीका सत्तासिन पदाधिकारीलाई UNEP को सल्लाह मनन् गर्न जोड दिऔं र हाम्रा MUSK जीलाई उहाँको प्रयत्नमा समर्थन जाहेर गरौं। यो समस्या क्षणिक भएकोले यो विवादलाई यहाँ लम्व्याउनु जरूरी छैन।’
‘समस्यालाई क्षणिक भनेर यति उच्च ओहदाबाट यस्तो सतही वक्तव्य दिन त अलि सुहाएन। विवाद अतिभौतिक र अध्यात्मिक बीचको हो भने मानवताले शिव र शैतान बीच एक रोज्नुपर्ने परिस्थिति मध्यनजर हुन्छ। जनमानसको विचार पनि जान्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। अहिलेलाई विवादको शृंखला यहींबाट सुरू गरौं’, मैले यति भनेर शून्य चौतारीको त्यो सम्मेलन अन्त्य भएको घोषणा गरेँ।
यो विवादको टिप्पणी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। मनन् होस्।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन २०, २०७७, ०१:३८:००